Awu, lo mshado ... Indlela esithanda ngayo imibhangqwana eminingi iholidi elihle, elifanekisela uthando lwezinhliziyo ezimbili! Futhi kuhle ukuthi akekho owodwa, owokuqala nowokuyinhloko, kodwa izinsuku eziningi zomshado. I-Calico, imikhosi yemithi nezinye izinto ziphumelelana, zifanekisela izigaba ezithile zokuhlala komndeni.
Lezi zinsuku kungenzeka zingabi nxazonke. Isibonelo, umshado we-velvet. Iminyaka eminingana yomshado ingakanani? Iminyaka engu-29 yomshado! Ngifuna ukukhuluma kabanzi ngalokhu kulesi sihloko.
Cabanga nje ukuthi une-velvet fabin kutholakale kalula. Ukumshaya ngesisu, uzizwa kanjani? Kuthambile, kuyathandeka ekuthinteni, kuyashisa futhi kuyathandeka. Ngesikhathi esifanayo sinyene futhi siphelile. Kubheka "kubiza futhi kucebile." Umbala kungaba yinto oyifunayo.
I-Velvet iyilungelo labantu abadala nabantu abahlakaniphile. Abantu abasha bavame ukuhlangana nezingubo ezivela kuso. Le ndwangu ibonisa ubuhle nobukhulu. Abantu besizukulwane esidala bangakwazi ukuthenga amagilavu we-velvet, noma isikhwama esikhwameni, noma i-tie.
I-velvet eyigugu yayiyaziwa nakumaGibhithe lasendulo. ERussia, indwangu yafika emakhulwini e-XV-XVI. Kusuka kwendwangu ye-velvet, izingubo zokugqoka zazikhonjiswe kubantu basebukhosini. Akuwona wonke umuntu ongakwazi ukugqoka izingubo ezivela kulesi sici. Emidwebo yasendulo, singayibona: i-velvet camisoles kanye namabhulukwe kwakuyilungelo labacebile, isimo ngabanye. Futhi futhi kumaqhawe alawa midwebo yi-berets ye-velvet nezicathulo, enziwe ngendwangu ebiza kakhulu. I-Velvet yayiyindleko ebiza kakhulu kunazo zonke izindwangu ezimakethe zase-Ancient East.
Kuyaziwa emlandweni ukuthi uhlu lwefa elishiywe yinhloko enomusa necebile yomndeni akufaki nje imali nemali yokuhlobisa, kodwa futhi ukusikeka kwe-velvet. Isitayela esibuciko seRashiya kwakuyisigqoko se-velvet esinezintambo, esasihlotshaniswa nezintambo zegolide namatshe ayigugu. Ngokuvamile babekhetha abomvu, abamnyama, abluhlaza okwesibhakabhaka, obuluhlaza bezingubo.
Futhi esikhathini sethu indlovukazi yaseNgilandi ingabonakala emikhiqizweni eyenziwe yalendwangu.
Usuku aluyona iJuba. Kodwa kubalulekile njengesiqiniseko sokubaluleka kwenyunyana ephethwe eminyakeni engu-29 edlule.
Umshado we-Velvet for umbhangqwana oshadile - uhlobo lwephawu, lusekelwe ekubalukeni kwendwangu. Umcimbi onjalo ubonisa ubuhle. Lokhu kusho ukuthi lo mbhangqwana, owahlala iminyaka engu-29 emshadweni, wakwazi ukunqoba ubunzima nezinkinga eziningi. Bobabili, njenge-velvet, bathwala iminyaka yabo, ububele babo. Bakwazi ukufakazela ukuthi lezi zinsuku zihle kakhulu futhi zinamandla njengendwangu enhle.
Omunye umshado we-velvet uwubufakazi bokuthi kuhlangene nakho okucebile ngokomoya. Umbhangqwana wakhe ungadla ifa labo abantwana.
Isibonakaliso samandla enyunyana - yilokho umshado we-velvet. Umshado wawunamandla futhi ubude, futhi lokhu kukhuluma ngamandla angaphakathi nobuhle babantu ababili, ikhono lokubusa ngokufanele "embusweni wabo omncane.
Kubhekwa njengomcimbi obalulekile futhi obaluleke kakhulu womshado we-velvet. Yini ongayinika umbhangqwana oshadile? Phela, ukwenza izipho zomshado we-velvet kuyadingeka! Kunezinhlangothi ezimbili zemali. Okokuqala: abashade nabo badinga ukuhalalisana. Okwesibili: izivakashi zilangazela ukuza nezipho.
Ngakusasa abashadile kufanele bajabulisane ngomunye ongokomfanekiso. Owesifazane ezinsukwini zakudala wadonsa inhliziyo esuka ku-velvet kuze kube yilolu suku futhi wanika umyeni wakhe. Kodwa manje akudingekile ukukwenza.
Kunezinketho eziningi zokwethulwa, kodwa zonke kufanele zibe ne-bias "ekhwalithi ye-velvet". Kungaba ama-roses amahle kakhulu emthunzini we-velvet, ama-slippers ekhaya asethempelini ahlobisa i-velvet, u-bow tie. I-Velvet ingashintsha izinto ezifana nayo: i-velor, umhlambi. Noma yimuphi owesifazane uzojabula ukuthola ibhokisi elincane le-velvet, ngaphakathi ngaphakathi kuyoba yindandatho noma yimuphi omunye umhlobiso.
Isipho singaba ingubo eyenziwe nge-velor, ibhokisi le-velvet lokuhlobisa. Ibhokisi elinama-cuff links noma ipeni lomthombo ngaphakathi lizohambelana nendoda. Umbala we-velvet ungahluka: obomvu, obuluhlaza, obuluhlaza.
Izivakashi ezimenywe emkhosini, nazo, zingaletha isikhangiso kuzipho zazo. Kungaba iphepha lokufaka i-velvet, izakhi zokuhlobisa, izimbali emabhokisini. Kanti futhi kungaba izincwadi ekubophekeni okubizayo kusuka kwendwangu echazwe, ama-albhamu esithombe sezithombe zomndeni. Yini ongayinika ngomshado we-velvet, wonke umuntu uyazikhethela yena. Vele udinga ukukhombisa u-wit kanye nendlela yokudala.
Umshado we-Velvet awukona umkhosi wokugubha usuku, ngakho-ke izinketho zokubamba iholidi zingaba yinoma yini. Ukugubha lolu suku kuyindaba eqondene nabantu ababili. Unelungelo lokunquma ukuthi kuzoba yini ukunqoba kwabo: kunomsindo futhi ugcwele noma uvikelekile.
Umbhangqwana oshadile ungasanda ukuqoqa etafuleni lokugubha ngamalungu omndeni nabangane kumbuthano omncane. Akunqatshelwe futhi kudla ukudla okuningi endaweni ethile yokudlela enhle noma i-cafe.
Mhlawumbe umndeni uzofuna ukugubha usuku lwabo ohambweni oluhlangene. Futhi kungafana nokuhamba kwe-banal ezindaweni zakho ozithandayo zomuzi, futhi uhambo oluya kwelinye izwe. Manje kulula ukuvakashela noma yikuphi ikhonto elingavamile emhlabeni.
Lokhu kungukuthi, ayikho inqubo ethize yokuphatha umshado we-velvet. Into ebaluleke kakhulu ukuqonda okushiwo umcimbi futhi ukwazi ukuwuthatha enkumbulweni nakwezithombe eziningi ezinhle!
Uma abashadile banquma ukubamba iholide ekhaya, ngendlela yomndeni, bese behlobisa umkhosi bazosiza amalungu amancane omndeni. Khona-ke wonke umuntu uzozibonakalisa ngokwakhe! Kungaba izimbali - isibonelo, ama-marigolds (kuxhomeke ngenkathi), izifanekiselo ze-velvet, indwangu yetafula etafuleni eneklani ekhethekile yezindwangu ezibizayo noma okufakiwe kusuka kwi-velor. Igumbi lingabuye lihlotshwe ngamakhethini "ngevelvet" futhi lihlakaze yonke indawo imishini yokugqoka nge-pillowcases evela kule ndaba.
Ungakwazi ukuhlobisa futhi "osemncane." Kulesi simo, izinto ezincane ezanele zokugqoka: ibhande, i-velvet belt, tie. Futhi ungenza konke lokhu ngezandla zakho.
Uma ubambe umkhosi esitolo sokudlela noma esinye isikhungo kubalulekile ukukhetha igumbi nge-design oyifunayo. Ngakho, isibonelo, izilenge ze-velvet, ama-sofas noma izihlalo ezine-upholstery ze-velvet zizobukeka zikhulu. Kungenzeka ngaphakathi ngaphakathi kwesithombe namafremu afanelekayo.
Futhi-ke, uma lolo suku luvumela, khona-ke ungakwazi ukuya ndawonye ohlangothini lwezilwandle ku-"velvet season" esithambile futhi ethandekayo. Lokhu kuyoba isipho esimangalisayo komunye nomunye! Nakuba kulokhu abambhangqwana bangakwazi "ukudlala" futhi bahlobise izingubo zabo ngezakhi ezihlobisa ezenziwe nge-velvet fabric.
Uma ubambe umshado, uma lokhu kuyindlela yokuzikhethela nezivakashi, abahleli kanye nezihlobo kufanele bakhumbule izinto ezibalulekile. Siyakuhalalisela ngomshado we-velvet kufanele kube okukhethekile.
Okokuqala, i-velvet yayihlale ibiza futhi isho okuningi. Futhi ubuhlobo obuningi babantu abahlala ndawonye iminyaka engu-29 (isikhathi esimangalisayo). Ukuqhubeka kulokhu, kubalulekile ukwakha ukuhalalisela kanye nemincintiswano. Akufanele abe yizinhlamba noma ezimbi.
Okwesibili, lo mbhangqwana usuhlangene nakho okubaluleke kakhulu kobudlelwano phakathi neminyaka. Banezinto okufanele baziqhenye ngazo futhi babe nokuthile okuzokwabelana nabo ngenzalo yabo. Lokhu kungukuthi, ukuhalalisela kungaba futhi kufanele kugxile kwifa eliyigugu lala mbhangqwana!
Okwesithathu, ungakwazi "ukushaya" ikhwalithi yendwangu, ukuyiguqula ibe isici sombhangqwana oshadile. Indwangu inamandla - izibopho zomshado zibonakala ziqinile! Indwangu ebumnene - yeka ububele obukhulu kulobu buhlobo! Imigwaqo yaseVelvet - bathandekayo laba bantu komunye nomunye! Futhi njalo.
Okwesine, umshado we-velvet awuseyona usuku lwamaJuba. Abantu abasondelene kuphela abangabutha etafuleni: umndeni nabangane. Ngakho-ke, ngamunye wabo uyoba nokuthile okumele akhumbule: izinto ezihlekisayo, izikhathi ezimnandi namaholide, impumelelo yezingane nezinto. Ezimweni ezicacile kakhulu, udinga ukutshela kulokhu ukuze uthole ngokuphumelelayo isithunzi somyeni nomfazi - abenza umkhosi.
Izibonelo zokuhalalisela ngevesi
Amagama wezivakashi ezibhekiswe kumbhangqwana oshadile angase abe yi-prose noma ivesi. Into esemqoka ukuthi bonke bazwakala beqotho futhi beqotho. Nasi isibonelo salokho okusemandleni okubongela ngokuhlonipha iminyaka engu-29 yobuhlobo bomshado. Umshado we-Velvet (amavesi):
Amashumi amabili nesishiyagalombili - inkathi yevelvet,
Phakathi kwabanye, kungenzeka ukuthi nguye ongcono kakhulu!
Siyakhumbula ukuthi kwenzeke kangakanani isikhathi eside,
Ngake nginethuba lucky.
Kusukela ngaleso sikhathi, ithemba ligcwele,
Injabulo, isambulo nephupho!
Ngokubambisana nangaphambi kokuba bathandane.
Le "velvet" iyabiza!
Sifuna ukuba ndawonye kuze kube yikhulu,
Kodwa hhayi iminyaka, kodwa imishado eyikhulu yobuhlakani!
Ukuthanda njengoba ngaphambili nokuphupha,
Ngokuphambene neminyaka nenjabulo ngenxa ye!
Senza ikhekhe eliyintandokazi etafuleni lokugubha
Uyini umthamo? isakhiwo ngamakhono
Biopolimodulyator: ukubuyekezwa, imiyalelo, incazelo
Indlela yokwenza zokuhlobisa ophahleni plasterboard ngezandla
Amafilimu ama-documentary ahamba phambili mayelana neMpi Yezwe Yesibili